Akubalulekile ukuphika ukuthi wonke umuntu empilweni kunezikhathi lapho ngingathanda ukwazi kudlule kanjani. Futhi uthanda ukuthi kwakudingekile hhayi kuphela ngenxa khona kwezinye izifo, kanjani ukuphoqa izenzakalo ezithile noma nje ukuze bangafiki yimuphi umcimbi. Kunoma ikuphi, sinikeza ulwazi lokuthi ungasenzela kanjani eyethile ikakhulukazi ngaphandle ukulinyazwa emzimbeni uqobo.
Izimo zethu zihluke kakhulu ngokwemvelo, lo nokulahlekelwa ukwazi kuyinto ngempela edabukisayo. Lokhu kungafaka: isiyezi kanye ikhanda, okungazelelwe angaboni kahle, enkeneneza ezindlebeni namehlo amnyama. Nokho, uzovuma ukuthi kubalulekile ukuba phumani ngokukhethekile ezimweni ezithile, ukufeza okuthile. Kulokhu-ke kuyadingeka lokuqala sonke sicabange ngazo imizimba yabo, njengoba ezinye izindlela elimazako kokubili ejensi ngabanye futhi isimo jikelele. Ngezansi thina uhlu izindlela ukufikelwa isinxi:
Ngokwemvelo, indlela yokuqala ukukhathala ngokweqile. Ukuze wenze lokhu, akudingeki ukuba ukulala izinsuku eziningana, ukuze umzimba ngempela isiphelile amandla abo izinqolobane. Nokho, le ndlela zingavumi kakhulu, ngoba asazi ukuthi yini eyokwenzeka kumuntu nathi, isibonelo, ngemva kwesonto. Ngakho musa ukulala isikhathi eside akulona ikhambi kakhulu sendlela ukufikelwa isinxi.
Engeza ukuphuza clonidine (elele amaphilisi). Nokho, kulesi simo umphumela ungaba ngempela ezingalindelekile, njengoba umzimba banganika tiphakamiso letehlukile ingxube ezinjalo. Mhlawumbe, uzobe olinganise kubhekwe kahle, futhi, kunalokho, ukwanda umsebenzi. Kodwa endabeni ka-ukweqisa izidakamizwa, wena kakhulu ngesikhathi impilo engozini njengoba yokufikelwa kungase sidonsa usuku lonke.
Indlela elilungile - sikwazi ukuphefumula ekuqaleni ngokuvamile kakhulu umoya quickened, bese ngqo ukuze ayibophe. Kulokhu, ukuntuleka komoya-mpilo kungabangela emfushane phumani ngaphandle kwemiphumela emibi umzimba. Nokho, uma une amasosha avikela ezifweni kanye nokuthuthukiswa diaphragm, inqubo akunakwenzeka ukuba bathethelele uqobo. Kakhulu ukuthi kuzokwenzekani - isiyezi.
ukwehlisa wegazi. Le ndlela ngokuyinhloko hhayi Kunconywa gipotonikam, okungukuthi abantu ingcindezi ongaphakeme. Lokhu kungenzeka kuphela liyochukuluza swoon eside, kodwa futhi singabangela ukufa. Ngisho noma le ndlela futhi ingxenye enkulu amathuba yokufikelwa, benza amahlaya naye engalandeli. Khumbula ukuthi ngisho noma unezingcindezi evamile, encishisiwe ke ngosizo kunemithi noma amaphilisi owaphuzayo kungaba nomthelela umsebenzi inhliziyo.
Ukusetshenziswa esiningi calcium ezibhebheni ukudla. Njenganoma indlela langaphambilini, it is hhayi Kunconywa ukuhlolwa, futhi likhona kuphela amaphuzu izibalo. Njengoba calcium ngokwayo nomthelela ekusebenzeni inhliziyo, ukuphuza ngokweqile, ikakhulukazi esiswini esingenalutho, kungase kubangele ukuthuthukiswa sina isifo senhliziyo noma osheshayo ukuboshwa inhliziyo (uma kahle pick up umthamo).
Abanye abantu bacabanga ukuthi uma ngemva niphele amandla ngokucijile ukuthatha isikhundla mpo, zonke izimpawu hamba, futhi ungenza elilandelayo mayelana nebhizinisi yabo, kodwa akuyona. Odokotela batusa cwilisa ngemva kwengozi isikhathi esithile emsebenzini zonke izitho evamile. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungakwazi ukuphuma embhedeni, kodwa ukulayisha ngokwabo into Kunconywa ngalolu suku.